Famaritana fohy momba ny asa tanana sy ny marika - The Word Foundation
Famaritana fohy momba ny zana-kazo sy ny Symbols
Akora ary famantarana dia manazava fahazavana vaovao eo amin'ny marika famantarana fahiny, marika, fitaovana, mari-pamantarana, fampianarana, ary ireo tanjona avo lenta amin'ny mason'ny Freemasonry.
Ity Didim-panjakana teo aloha ity dia efa nisy teo amin'ny anarana iray na iray hafa talohan'ny fanorenana ny piramida tranainy indrindra. Lehibe noho ny fivavahana fantatra ankehitriny izany! Ny mpanoratra dia nanipika fa ny Masonry dia ho an'ny olombelona-ho an'ny tenany manokana amin'ny vatan'ny olombelona rehetra.
Akora ary famantarana dia manazava ny fomba ahafahan'ny tsirairay amintsika misafidy ny hiomana amin'ny tanjona ambony indrindra amin'ny olombelona-Ny fahalalahana, ny fanavaozana ary ny tsy fahafatesana.